स्वाभिमानको रहस्य | चितवन पोष्ट
गृह » स्वाभिमानको रहस्य
मान्छेको नैसर्गिक स्वभाव भनेको आनन्दको खोज हो । प्रत्येक मनुष्य आनन्दको खोजमा सक्रिय रहेको हुन्छ । मनुष्यका हरेक क्षणहरु आनन्द प्राप्तिकै लागि खर्च भइरहेका हुन्छन् । मान्छे जहाँ जाओस्, जे गरोस् वा जसरी बाँचोस्, ऊ प्रसन्न रहन चाहन्छ, खुसी रहन चाहन्छ । चुरोट खाने मान्छेले पनि चुरोटको धूवाँभित्र आनन्दको खोजी गरिरहेको हुन्छ, चुरोट नखाने मान्छेले पनि स्वस्थ जीवनशैलीभित्र आनन्द देखिरहेको हुन्छ । चोरी गर्ने र चोरी गर्न हुन्न भन्ने दुवै खालका मान्छेले आनन्दकै खोजी गरिरहेका छन् ।
हामी आनन्द एकाएक उपलब्ध हुन सक्ने कुरा होइन भन्ने मानसिकतामा बाँचेका छौँ । यही मानसिकताले गर्दा नै हामी आनन्दलाई भेट्न असफल भइरहेका छौँ । आनन्द छोरानाति, पनाति र धेरै रूपैयाँपैसाको जोहो गरेपछि मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन पालेर बसेका छौँ हामी । आनन्द आजै र अहिल्यै प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई पत्यार लाग्दैन । आनन्दलाई भविष्यको गर्भमा छोडेर हामी स्वर्णिम वर्तमानलाई दुःख, कष्ट र तनावले ग्रस्त बनाउँदै बाँचेका छौँ । हामीसँग जे छ, तनाव छ । हाम्रो वर्तमान निराशा र कुण्ठाले भरिपूर्ण छ ।
मान्छे अन्य पशुपक्षी र प्राणीहरु भन्दा बढी तनावग्रस्त हुने कारण उसको आवश्यकताभन्दा धेरै बाठोपन हो । ईश्वरले उसलाई चिन्तनको लागि मस्तिष्तक दिएको छ, तर चिन्तनलाई उसले चिन्तामा बदलेको छ । चाहिनेभन्दा बढी इन्द्रियहरुको गुलाम बनेको छ । पशुहरुमा मान्छेको भन्दा नियमित जीवनशैली देखिन्छ । आपूmसँग जे उपलब्ध छ, त्यसबाहेकको अपेक्षा पशुहरुमा हुँदैन । मान्छेका लागि भोजनलाई स्वाद लिएर ग्रहण गर्नका लागि जिब्रो उपलब्ध भएको छ, तर जिब्रोलाई यति उत्तेजक वस्तुको भोजनमा व्यस्त बनायो कि आज उसको जिब्रो झट्ट स्वाद नपाउने भएको छ । सादा भोजन र सागसब्जीले उसलाई नपुगेर चटपटेजस्ता अति मसलादार वस्तुको उपभोगमा ऊ लाग्यो ।
आजको मान्छे पाशविक आनन्दभन्दा माथि उठ्न सकेन । कतिपय विषयका सन्दर्भमा त झन् मान्छे पशुभन्दा पनि निकृष्ट भएर गएको छ । पशुमा मुख्य तीन प्रकारका आनन्द हुन्छन् ः १) भोजनको आनन्द २) विषयवासना तृप्तिको आनन्द र ३) निद्राको आनन्द । पशुहरुको चिन्तन जतिखेर पनि खानकै लागि हुन्छ । दाम्लोबाट छुट्यो कि बालीनाली वा खाद्यान्नमा मुख लगिहाल्ने पशुको स्वभाव हुन्छ । यौनका सन्दर्भमा त झन् पशुको कुनै नगरौँ । आमा, बाबु, दिदीबहिनी, दाजुभाइजस्ता सम्बन्धको कुनै हेक्का हुँदैन पशुहरुलाई । समय आएपछि विपरीत लिङ्गी भेटे पुगिहाल्छ । अति कामको वेगमा त पशुहरु समलिङ्गीमाथि नै आक्रमण गर्न पनि पछि पर्दैनन् । समय र मौसमको ख्याल भने मान्छेमा भन्दा पशुमा भएको पाइयो । निद्रा पशुको अर्को स्वभाव हो । निदाउनुको कुनै सीमा छैन तिनलाई ।
यसरी पशुलाई वासना तृप्ति, भोजन र निद्राको बाहेक अर्को कुनै कुराको ध्यान हुँदैन । आजको मान्छे पनि यिनै पाशविक आनन्दभन्दा माथि उठ्न सकेन । भोजनकै चिन्तनमा लागेको छ, रातदिन । ‘के गर्ने, खानकै लागि त यति दुःख गरिएको छ । त्यसैले भोजनचाहिँ टन्न गर्नुपर्छ’– यो आममानिसको भनाइ हो । यही भनाइले पनि मान्छे खानका लागि मात्र बाँचेको प्रस्ट हुन्छ । अरु गर्नुपर्ने काम बिर्सिए पनि खान भने हामी कहिल्यै छोड्दैनौँ । न त हामीमा भोजनको मात्राका बारेमा कुनै ज्ञान नै छ । कस्तो खाने ? कसरी खाने ? के खाने ? यसरी छनोट गर्नुभन्दा पनि ‘खान पाए हुने’ चिन्तनले हामीमा घर गरेको छ । पेटमा हावा र पानीलाई चाहिने ठाउँसमेतको अतिक्रमण गरी हामी भोजन गर्दछौँ ।
कामवासना तृप्तिका सन्दर्भमा पनि आजको मान्छे पशुभन्दा माथि उक्लन सकेन । आज पशुहरुझैँ मान्छे नाता, सम्बन्ध, मर्यादा र अनुशासनको लक्ष्मणरेखालाई उल्लङ्घन गरी यौनक्रियाकलापमा संलग्न भएका प्रशस्त घटनाहरु पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुने गरेकै छन् । आफ्नो हैसियत, पद, प्रतिष्ठा, शारीरिक अवस्था, सामाजिक मूल्य र मर्यादाभन्दा हामीलाई हाम्रा इन्द्रियहरुको अतिभोगको इच्छा पूरा गर्न मन लाग्दछ । यसरी सामाजिक र नैतिक धरातलको नियमलाई पनि धुजाधुजा बनाई इन्द्रियजन्य आनन्दका लागि आजको मान्छे पशुवत् लागेको छ र लगभग पशु बनेको छ ।
विवेकले इन्द्रियका आकाङ्क्षालाई समाज, संस्कृति, धर्म, मूल्य र मर्यादाको कसीमा राखेर मूल्याङ्कन गर्छ र त्यसपछि मात्र क्रियान्वयनका लागि सिफारिस गर्दछ । यसरी विवेकले गरेको सिफारिसका आधारमा नै इन्द्रियहरुले गर्ने र नगर्ने कुराको छिनोफानो हुन्छ । मान्छेका सन्दर्भमा सबैभन्दा वैज्ञानिक प्रक्रिया नै यही हो । तर, भएको के छ भने हाम्रो विवेक इन्द्रियहरुको गुलाम बनेको छ । हाम्रा गुप्तेन्द्रियहरुले भनेअनुसार हामी हिँड्छौँ । जिब्रोले मागेको कुरा विवेकलाई नसोधी खाइदिन्छौँ । बोल्न मन लागेको कुरा विचारै नगरी बोलिदिन्छौँ । सुन्न नहुने कुरा सारै ध्यान दिएर सुनिदिन्छौँ ।
हाम्रा इन्द्रियहरुले जितेको र विवेक पराजित भएको अवस्था छ । इन्द्रियहरु विवेकमाथि हाबी भएपछि हामीबाट कहिल्यै पनि परमार्थ र कल्याणका काम हुन सक्दैनन् । संसारमा जति पनि निर्माण र विकासका काम भएका छन्, ती सबै सुन्दर र शान्त विवेकका परिणाम हुन् भने ध्वंस र विनाश इन्द्रियका परिणाम हुन् । बाबुआमाले भनेको नटेर्ने छोराछोरी उद्दण्ड र अनुशासनहीन हुने गर्दछन् । अभिभावकले भनेको मान्नेहरुले नै सबैको प्रेम र स्नेह पाउन सक्छन् । अभिभावकप्रति उत्तरदायी सन्तानबाट मात्र समाज र राष्ट्रको कल्याण सम्भव हुन्छ ।
हामी पनि इन्द्रियहरुका अभिभावक हौँ । यो शरीर हाम्रो घर हो । घरमा अभिभावक सबैभन्दा उच्च र सम्मानित हुन्छन् । हाम्रो बुद्धि र ठीकबेठीक छुट्याउने विवेक शरीरको अभिभावक हो । यही बुद्धिको निर्देशनलाई अक्षरशः परिपालन गरेर मात्रै हामी सुन्दर जीवन व्यतीत गर्न सक्दछौँ । जहाँ अभिभावकका निर्देशनको अवमूल्यन हुन्छ र आपूmखुसी स्वच्छन्द निर्णय गर्न थालिन्छ, त्यहाँ मर्यादा र अनुशासनको थोपोछिटो बाँकी रहँदैन । आज हरेक व्यक्तिको विवेक आफ्ना इन्द्रियहरुको बन्दी बनेको छ । इन्द्रियहरुले जे चाह्यो त्यही गरिरहेका छन् । हाम्रो मन विवेकको होइन, इन्द्रियहरुको नोकर बनेको छ ।
विवेक विभिन्न मानवीय सभ्यता, आदर्श, समाज, संस्कृति र मर्यादाको साझा दर्शन हो । त्यसैले विवेक कहिल्यै पनि एकाङ्की हुन सक्दैन । विवेकका हरेक प्रयत्नमा व्यक्तिलाई निचताबाट उचतातिर लैजाने सामथ्र्य लुकेको हुन्छ । विवेकको तेस्रो नेत्र खुलेका बेलामा व्यक्तिका तमाम अशान्ति, उच्छृङ्खलता र भोगवासनाले शान्ति, अनुशासन र त्यागको विशिष्टतालाई प्राप्त गरेका हुन्छन् । विवेक शक्ति नै व्यक्ति र समाजलाई सर्वदा उन्नति र शाश्वत विकासको गिरिमा उकाल्ने एक मात्र सोपान हो ।
समाज र व्यक्तिव्यक्तिमा आज यही दण्डहीनता बढेर गएको छ । शिरले पुच्छर होइन, पुच्छरले शिर हल्लाइदिएको छ । हाम्रो विवेकमाथि हाम्रा इन्द्रियहरु नराम्ररी हाबी भएका छन् । सायद, यही भएर होला हामीमा निराशा बढेर गएको छ । जहाँ विेवक गुलाम बनेको हुन्छ, त्यहाँ आशाको सञ्चार कसरी हुन्छ र ! हाम्रो मनले विवेकलाई होइन, इन्द्रियजन्य भोग, ऐश्वर्य र तृप्तिलाई अनुमोदन गरेको छ । थाहा छैन, इन्द्रियहरुले विवेकमाथि शासन गरेको अवस्था कहिलेसम्म चल्ने हो । हाम्रो भौतिक क्रान्तिले इन्द्रियहरुलाई मालिक र विवेक एवम् विचार शक्तिलाई नोकरमा बदलिदिएको छ । यसैले समान लुटेरा, ठग र धूर्तहरुको अखडा बन्दैछ ।
हामी पाशविक आनन्दभन्दा माथि उठौँ र परमको गन्तव्यतिर प्रस्थान गरौँ । कहिलेसम्म हामीले इन्द्रियहरुको गुलामी गर्ने र आफ्नो प्रतिष्ठालाई सतहमा पु¥याउने ? हामीलाई पशुभन्दा पृथक मह¤वमा स्थापित गर्ने विवेकको अनादर गरेर गुप्तेन्द्रियको चाकडी गर्दैमा के हामी महान् बन्दछौँ ? इन्द्रियका दासहरुको शिर त सधैँ डर, लाज र चिन्ताले झुकिरहेको हुन्छ । इन्द्रियको दासतालाई स्वीकार्नेहरुले त आफ्नो स्भाभिमान मात्र गुमाउँदैनन्, जीवनलाई धन्य बनाउने स्वर्णिम अवसरको पनि दुरूपयोग गरिरहेका हुन्छन् । विवेकको पूजा गरेर सभ्य र सम्मानित बनौँ । इन्द्रिय हाम्रा साधन हुन्, विवेक तिनको सारथि । यही नै संसार विजयको वास्तविक सूत्र हो र स्वाभिमानको रहस्य पनि ।
स्थानिय शिक्षा ऐन हाम्रो सरोकार
– डा. हरिप्रसाद कँडेल hari_kandel007@hotmail.com प्रसङ्ग : शिक्षा ज्ञान तथा सीप...
संवेदनशील क्षेत्र संरक्षणमा संघीयताको प्रभाव
– रामशरण गैरे sriramgaire@gmail.com नेपालको पर्यटन विकासको प्रमुख धरोहर यहाँका...
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरु
–नरनाथ पाण्डे pndynn2031@gmail.com हामीलाई थाहै छ, हामीले निकै ठूलो सास्ती सहेर...
डा. गोविन्द केसीको अनशन र न्यायालय
भरतपुर : राजधानीको रहर र खरको छानोमुक्त सहर